विभिन्न समितिका सभापति र सभामुखबीच छलफल
८ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापति र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबीच समितिको काम कारबाहीको विषयमा छलफल भएको छ । आइतबार संघीय संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरूले सभामुख सापकोटासँग भेटेर समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
गएको साउन ५ गते पछि समिति सभापति र सभामुखबीच छलफल भएको थिएन । यस छलफललाई समिति सभापतिहरुले नियमित छलफलको रुपमा भएको बताएका छन् । बैठक पछि बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र समितिले गरिरहेका काम कारबाहीको बारेमा सभामुखसँग छलफल भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु नै हो । र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार यसलाई कामयावि कसरी बनाउने ? परिणाममुखी कसरी बनाउने, जनमुखी कसरी बनाउने र सिंगो संसदलाई नै प्रभावकारी ढंगबाट कसरी अगाडी बढाउने ? हाम्रो काम मुख्यतया कानुन निर्माण गर्ने कुराहरु भएकाले कानुन निर्माँणमा प्रभावकारी हिसाबबाट कसरी जाने ? सम्बन्धित सरोकारवालासँग पनि बहस गरेर जाँदाखेरी त्यसका त्रुटीहरु कमी हुन्छ । कानुनको जनताले स्वामित्व ग्रहण गर्ने जनताले मेरो लागि बनेको हो भन्ने खालको कुराहरु पनि हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा व्यापक रुपमा छलफल भयो । र हामीले दिनुपर्ने सुझाव, काम गर्ने शिलशिलामा भोगेका जुन अप्ठ्याराहरुलाई पनि सुधार गरेर कसरी जाने भन्ने कुराहरु भए ।’
सभामुख सापकोटाले सभापतिहरूको राखेका कुराहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउनुभएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विगतमा प्रतिनिधिसभाका समितिहरुले एकै विषयमा फरक फरक निर्देशन दिने र अर्को समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विषयमा समेत छलफल चलाएको गुनासो बढेपछि सभामुखले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।
कमाई खाने जग्गा नदीले बगाएपछि ७६ परिवार विस्थापित
बलात्कारपछि घाँटी निमोठेर हत्या
कोरोना संक्रमित बढेपछि दोलखामा भदौ ६ गतेसम्म लकडाउन
कर्णालीका ७ जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य